Crizotinib uzuzu (877399-52-5) | anaplastic lymphoma kinase inhibitor
/ ngwaahịa / Ndị R & D mmeghachi omume / Crizotinib ntụ ntụ (877399-52-5)
Rating: SKU: 877399-52-5. Category: Ndị R & D mmeghachi omume
AASraw nwere njikọ na mmepụta ikike site na gram ka usoro nchịkọta nke Crizotinib ntụ ntụ (877399-52-5), n'okpuru ụkpụrụ CGMP na usoro nchịkwa mma.
Crizotinib uzuzu uzuzu
Crizotinib uzuzu isi agwa
aha: Crizotinib uzuzu
Usoro Molecular: C21H22Cl2FN5O
Molekụla arọ: 450.343
agba: acha ọcha na-acha odo odo-odo ntụ ntụ
Crizotinib ntụ ntụ na ọgwụgwọ ọgwụgwọ ọrịa cancer
Crizotinib ntụ ntụ, Xalkori ntụ
Crizotinib ntụ ntụ Usage
Crizotinib ntụ ntụ bụ ọgwụ cancer na-egbochi uto ma gbasaa mkpụrụ ndụ cancer n'ime ahụ. A na-eji crizotinib akpụ ntụ agwọ ọrịa cancer na-adịghị na obere cell.
Crizotinib uzuzu bụ onye na-eme ka tyrosine kinase. Ọ na-arụ ọrụ site na igbochi enzyme a na-akpọ lymphoma kinase (ALK) anaplastic. Crizotinib uzuzu na-arụ ọrụ na mkpụrụ ndụ kansa cancer nke nwere ọdịdị ocheractive nke ALK. Banyere 5 na 100 ndị mmadụ (5%) na NSCLC nwere nke a. A na-akpọ ya ALK ọrịa.
Dọkịta gị nwere ike ịkwado ka ị nweta Crizotinib ntụ ntụ ma ọ bụrụ na i meela ọrịa cancer na-adịghị obere cell nke bụ ALK mma.
A na-enye capsules XALKORI ntụpọ dịka akwụkwọ ndị nwere ike ịchọta nke nwere 250 mg ma ọ bụ 200 mg nke Crizotinib ntụ ntụ na colloidal silicon dioxide, microcrystalline cellulose, calcium phosphate dibasic anhydrous, glycolate soda sodium, magnesium stearate, na shells capsule gelatin siri ike dị ka ihe na-adịghị arụ ọrụ.
Mmiri mmiri na-acha odo odo na-acha odo odo bụ gelatin, titanium dioxide, na oxide na-acha uhie uhie. Okpokoro mmiri na-acha ọcha opaque na-acha ọcha gelatin na titanium dioxide. Ink ederede nwere shellac, propylene glycol, ngwọta ammonia siri ike, potassium hydroxide, na black iron oxide.
Crizotinib ntụ ntụ bụ capsule. Ị na-elo ya dum na iko mmiri. Ị nwere ike iji ya ma ọ bụ na-enweghị nri.
Ị ga-ewere capsules dịka ntụziaka dọkịta gị ma ọ bụ onye na-enye ọgwụ na-enye gị.
I kwesiri iji ọgwụ kwesịrị ekwesị, ọ bụghị karịa ma ọ bụ obere.
Akwụsịla ịṅụ ọgwụ cancer ma ọ bụrụ na ị gwaghị ọkachamara gị na mbụ.
Ị na-ewere ya ugboro abụọ n'ụbọchị - n'otu ụtụtụ na otu uhuruchi.
Ị na-anọgide na-ewere ya n'ihi na ọ bụrụhaala na ọ ka na-arụ ọrụ, ọ gwụla ma mmetụta ndị dị na ya dị njọ.
Ị nwere ule ọbara tupu ị malite ọgwụgwọ na n'oge ọgwụgwọ gị. Ha na-elele mkpụrụ ndụ ọbara gị na ihe ndị ọzọ na ọbara. Ha na-enyochakwa otú imeju na akụrụ na-arụ ọrụ.
Ịdọ aka ná ntị banyere Adrafinil
Ọrịa cancer nwere ike iji ọgwụ ndị ọzọ na ọgwụ ndị ọzọ na-emekọrịta ihe. Gwa onye dọkịta gị ma ọ bụ onye na-enye ọgwụ banyere ọgwụ ọ bụla ị na-ewere. Nke a na-agụnye vitamin, ihe mgbakwasị ahịhịa na ihe ngwọta.
Zere mkpụrụ vaịn na mkpụrụ vaịn n'ihi na ha nwere ike ime ka mmetụta ndị ọzọ dịkwuo elu.
Ime ime na igbochi
Ọgwụ a nwere ike imerụ nwa na-eto eto n'afọ. Ọ dị mkpa ka ị ghara ịmụọ ma ọ bụ mụọ nwa mgbe ị na-agwọ ọgwụ a ma ọ dịkarịa ala ọnwa 3. Gwa dọkịta gị ma ọ bụ nọọsụ maka ịme mgbochi dị irè tupu ị malite ọgwụgwọ.
Anyị amaghị otú ọgwụgwọ a nwere ike isi metụta ọmụmụ. Ị nwere ike ghara ịtụrụ ime ma ọ bụ mụọ nwa mgbe ị gwọchara ọgwụ ọjọọ a. Gwa dọkịta gị tupu ịmalite ọgwụgwọ ma ọ bụrụ na i chere na ị nwere ike ịchọọ nwa n'ọdịnihu.
Ụfọdụ ndị ikom nwere ike ịchekwa spam tupu ịmalite ọgwụgwọ. Ụfọdụ ndị inyom nwere ike ịchekwa àkwá ma ọ bụ embrayo tupu a gwọọ ha.
Adịghị ara ara gị n'oge ọgwụgwọ a n'ihi na ọgwụ ahụ nwere ike ịba n'ime mmiri ara gị.
Ọgwụgwọ maka ọnọdụ ndị ọzọ
Gwa ndị dọkịta ndị ọzọ, ndị nọọsụ, ndị na-agwọ ọrịa ma ọ bụ ndị dọkịta ọ bụla na ị na-enweta ọgwụgwọ a ma ọ bụrụ na ịchọrọ ọgwụgwọ maka ihe ọ bụla ọzọ, gụnyere nsogbu ezé.
Enweghị ọgwụ mgbochi ọrịa na-ekiri ndụ gị mgbe ị na-agwọ ọrịa nakwa maka ọkara ọnwa 6.
Ị nwere ike:
-agba ogwu ozo, ma ha nwere ike ghara inye gi oke nchekwa dika o na-eme
-agba ogwu ohuru
- soro ndị ọzọ nwere ọgwụ mgbochi ndụ dị ka injections
Zere ka gị na ndị na-aṅụ ọgwụ na-ejide ọnụ (ogwu ogwu). Nke a gụnyere ọgwụ ogwu rotavirus nyere ụmụ ọhụrụ. Ọrịa ahụ dị na mmamịrị nwa ruo na izu 2 ma nwee ike ime ka ị na-arịa ọrịa. Ya mere, zere igbanwe ụra ha maka izu 2 mgbe ha ga-agba ọgwụ mgbochi ma ọ bụrụ na o kwere mee. Ma ọ bụ yikwasị saa mkpofu na-ehicha aka gị ma emesịa.
Ọ dịkwa mkpa ka ị zere onye ọ bụla nwere ọrịa polio ma ọ bụ ọrịa ọgbụgba ọbara na nso nso a.
Ulo XALKORI (Crizotinib ntụ ntụ) bụ onye na-eme ihe na-eme ka onye na-anabata ihe na-eme ihe na-ezighị ezi nke tyrosine kinase. Ụdị ihe omimi nke Crizotinib ntụ ntụ bụ C21H22Cl2FN5O. Ibu arọ ububo bu 450.34 daltons. A kọwara Crizotinib ntụ ntụ dị ka (R) -3- [1- (2,6-Dichloro-3-fluorophenyl) ethoxy] -5- [1- (piperidin-4-yl) -1H-pyrazol-4-yl] pyridin- 2-amine.
Crizotinib uzuzu bụcha ọcha iji kpuchie-edo edo uzuzu na pKa nke 9.4 (chipididinium cation) na 5.6 (pyridinium cation). Ntuchi nke Crizotinib uzuzu na mgbasa ozi na-eme ka ọ dịkwuo pH 1.6 dị na pH 8.2 site na ihe karịrị 10 mg / mL ruo ihe na-erughị 0.1 mg / mL. Ihe ndekọ nke ọnụọgụ nkesa (octanol / mmiri) na pH 7.4 bụ 1.65.
Nweta enyemaka ahụike mberede ma ọ bụrụ na ị nwere ihe ọ bụla n'ime ihe ịrịba ama ndị a nke mmeghachi omume nfụkasị: hives; ume iku ume; ịba ihu gị, egbugbere ọnụ, ire, ma ọ bụ akpịrị.
Kwụsị iji Crizotinib uzuzu kpọọ dọkịta gị n'otu oge ma ọ bụrụ na ị nwere mmetụta dị egwu dịka:
oké aghara aghara, ike, ngwa ngwa ma ọ bụ na-agbaji obi obi;
nsogbu nhụhụhụhụhụhụhụhụhụ ụzọ dị ka ọhụụ na-adịghị mma, mmụba nke anya gị na ìhè, ma ọ bụ ịhụ njupụta nke ìhè ma ọ bụ "floaters";
obi mgbu, akọrọ ụkwara ma ọ bụ ụkwara na imi, wheezing, mmetụta mkpụmkpụ nke ume; mfe bruising, ọhụrụ na-agba mmee bleeding
Crizotinib ntụ ntụ Powder Powder
Crizotinib ntụ ntụ Marketing
Esi zụta Crizotinib ntụ ntụ si AASraw